> Resource> iPad> otú nyefee Photos si iPad ka iPad
Mgbe na a ọhụrụ iPad, i nwere ike na-amasị idetuo foto site na iPad ka iPad. Mgbe ahụ, ị nwere ike ịhụchalụ photos na ọhụrụ gị iPad. Iji mee nke a ọrụ, yuo pụrụ ịdị mkpa ka a-atọ ndị ọzọ-ngwá ọrụ. A abụọ ike ngwaọrụ gị. Otu ngwá ọrụ bụ ihe iPad ka iPad transfer ngwá ọrụ aha ya bụ na Wondershare TunesGo. Ngwá ọrụ a na-akwado na-ebufe photos, music, videos, listi ọkpụkpọ na kọntaktị site na otu iPad ọzọ. Ke adianade do, ọ na-enye gị nyefee music na vidiyo si gị iPad ka iTunes na PC. Ndị ọzọ bụ Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac. Ọ bụ otu-click data transfer ngwá ọrụ nyefee ntị na mbadamba na-agba ọsọ iOS, Android na Symbian. Na ya, i nwere ike nyefee photos n'etiti iPads na 1 Pịa.
Ngwọta 1: Iji TunesGo nyefee foto ndị si iPad ka iPad
Ngwọta 2: Iji MobileTrans idetuo foto site na iPad ka iPad
TunesGo na-tumadi ji jikwaa data na gị iPad, dị ka music, foto na vidiyo. Ọ na-enyere ị na-niile data na gị iPad ọma haziri. Ọ na-enye unu nyefee foto site na otu iPad ọzọ enweghị ihe ọ bụla ọnwụ. The akụkụ n'okpuru tumadi na-agwa gị otú ị ịkwaga photos n'etiti abụọ iPads na-agba ọsọ iOS 9/8/7/6/5. Download iPad ka iPad transfer ngwá ọrụ na kọmputa. Lelee mfe nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ abụọ iPads na PC mgbe na-agba ọsọ a usoro
Na-amalite na, awụnyere na-agba ọsọ ahụ iPad ka iPad transfer na kọmputa. Jikọọ gị abụọ iPads na kọmputa site na eriri cables. Nke a na usoro ga-chọpụta abụọ iPads ozugbo na mgbe ahụ na-egosi ha na isi window. Site n'aka ekpe kọlụm, ị nwere ike na-ele niile Ama nke abụọ iPads.
Nzọụkwụ 2. Copy foto site na iPad ka iPad
Na ekpe kọlụm, pịa triangle tupu iPad ị ga-amasị mbupụ photos. Na ya, Atiya, pịa "Photos". Mgbe niile nchekwa na-gosiri na nri. Họrọ gị chọrọ nchekwa ma ọ bụ albums kere na TunesGo ngwá ọrụ. Pịa "Export ka". Na ndọpụta ndepụta, họrọ mbupụ gị iPad (Gị iPad aha a ga-emere ebe a). Mgbe ahụ, foto transfer usoro amalite. Jide n'aka na ma gị iPads na-ejikọrọ na kọmputa gị.
Ma ọ bụ, na-emeghe a nchekwa, dị ka Photo Library. Họrọ foto na ị ga-amasị nyefee. Mgbe ahụ, pịa "Export ka" nyefee ka iPad na ga-enweta photos.
Cheta na: The Wondershare TunesGo arụ ọrụ nke ọma na iPad ikuku, iPad Obere na Retina ngosi, iPad Obere, The New iPad, iPad 2, iPad na Retina ngosi na iPad 1 na-agba ọsọ iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 na iOS 9 .
Mgbe nyefe-agwụ, ị nwere ike ịlele exported album gị iche iPad. Pịa triangle tupu lekwasịrị iPad. Pịa "Photos". Mgbe ahụ exported nchekwa ma ọ bụ album ga-azọpụta "Photo Library".
Mere! Ọ bụ adịghị ike ịkwaga foto site na iPad ka iPad, ọ bụghị ya? E wezụga na-ebufe foto site na iPad ka iPad, ị nwekwara ike iṅomi music si iPad ka iPad na-akpali foto site na iPhone ka iPhone.
Gbalịa mee ihe ndị Wondershare TunesGo ugbu a!
Dị ka m kwuru n'elu, na-MobileTrans ngwá ọrụ, ị nwere ike nyefee foto site na otu iPad na ibe-1 Pịa. Ọ bụ a virtus-free ngwá ọrụ. Ị nwere ike iji ya n'enweghị. Ugbu a, download MobileTrans na-eso nzọụkwụ m mara otú nyefee photos n'etiti iPads. Ebe a, m na-Windows version dị ka ihe atụ.
Cheta na: Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iPad Obere na Retina ngosi, iPad Obere, iPad ikuku, The New iPad na ndị ọzọ na-agba ọsọ iOS 9/8/6/5/7. Ego na-akwado iPads site Wondershare MobileTrans ebe a.
Nzọụkwụ 1. Gbaa ngwá ọrụ a na kọmputa gị
Ihe mbụ ị ga-eme bụ iji wụnye ngwá ọrụ a - MobileTrans na kọmputa gị. Wụnye ya. Mgbe ahụ, ị ga-ahụ bụ isi window. Pịa na ekwentị ekwentị Nyefee ime na.
Nzọụkwụ 2. Iji USB Gịnị jikọọ gị abụọ iPads na kọmputa
Jiri USB Gịnị jikọọ gị abụọ iPads na kọmputa. The MobileTrans ngwá ọrụ ga-chọpụta gị abụọ iPads-akpaghị aka. Mgbe ahụ, gị iPads ga-egosi n'elu ke akpan window. Otu bụ na ekpe, ndị ọzọ ziri ezi. Ọ bụrụ na ị na-aga iPad nwere ọtụtụ achọghị songs, ị nwere ike ihichapụ ha niile site uhuruchi oyi "Doro Anya data tupu oyiri". Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na-ha, adịghị nne Mmetụta oyi "Doro Anya data tupu oyiri".
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe abụọ iPads 'ebe, pịa "tụgharịa".
Nzọụkwụ 3. Nyefee foto site na iPad ka iPad
Dị ka ị na-ahụ, ị ​​nwere ike nyefee music, videos, kalenda, iMessages, foto na kọntaktị. N'ihi ya, ọ bụrụ na ị chọrọ naanị nyefee photos, ị kwesịrị ị na-ewepụ akara tupu kalenda, ederede ozi (iMessages), kọntaktị, videos na music. Ugbu a, ọ bụ oge pịa "Malite Copy". N'oge usoro, unu ga-edebe gị abụọ iPads ejikọrọ.
Gbalịa MobileTrans nyefee foto site na otu iPad ọzọ.